Qiimaynta Shaqaalaha Degmada Feerfeer - Cakaara News
Qiimaynta Shaqaalaha Degmada Feerfeer
Feerfeer( cakaaranews )Sabti 2da April 2016, Shir ku saabsan qiimaynta Rubaca Sadexaad islamarkaana lagu qiimaynayay waxqabadka shaqaalaha iyo ilaalinta saacadaha shaqada oo ay kasoo qayb galeen dhamaan shaqaalaha Degmada Feerfeer ee Gobalka Shabeele ayaa saaka ka dhacay isla degmada feerfeer.
Hadaba shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska maamulka shaqaalaha CPA ee degmada feerfeer ayaa waxaa furitaankiisi ugu horayn kahadlay Gudoomiyaha Degmada Feerfeer Mudane Maxamed Khadar Faarax oo sheegay in shirkan ujeedadiisu tahay in lagu kala saaro shaqaalaha ilaaliya saacadaha shaqada islamarkaana shaqo wanaaga leh iyo shaqaalaha magac u yaalka ah ee aan saacadaha shaqada ilaalinin islamarkaana aan waxqabadka lahayn. Sidookale gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay shaqaalihii kuliitay shaqo galka inay iska saxaan khaladaadkooda, ugudanabyna wuxuu xusay gudoomiyuhu in ay shaqaalaha modelka ahi ay leeyihiin abaalmarin dhiirigalin ah.
Dhinaca kale waxaa isna kahadlay shirkan qiimaynta ah Madaxa Xafiiska C.P.A da Degmada Feerfeer mudane Maxamuud Muxumed Dude oo sheegay in xafiiska maamulka shaqaalaha ee CPA uu yahay mid utaagan ilaalinta xuquuqda shaqaalaha islamarkkaana ah mid kula xisaabtamaya shaqaalaha in ay kasoobaxaan xilka iyo waajibaadkooda shaqo.
Sidookale wuxuu xusay masuulku in kadib markii dabagal iyo qiimayn ay sameeyeen ay kusoo saareen shaqaale badan oo magac uyaala ah iyo shaqaale sifiican uga soobaxay xilkii iyo waajibaadkii loo idmaday sidaas darted shaqaalaha xafiiska maaliayada degamada feerfeer ayaa noqday shaqaalaha ugu shaqada fiican islamarkaana ilaaliya saacadaha shaqada.
Sikastaba ha ahaatee qiimayntan oo ahayd qiimaynta Rubaca Sadexaad ayaa Waxaa ugu shaqo gal wanaagsanaaday xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha degmada feerfeer waxaana lagu shilimaaday ama abaalmarin loosiiyay 10,000 oo bir maadaadma ay noqdeen xafiiska ugu modelsan qiimayntan.